China collaspsible eriri afo nchekwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe na suppliers | Kaiguan
jerry plastic transperent
Japanese sake 18L obi ụtọ ...
5 lita ultraso nke nwere ike imebi ...
Nkwakọ ngwaahịa na-acha anụnụ anụnụ
5 lita ultrasound gel akpa
Ọkwa nri LDPE cubitainer
mmiri nchekwa eriri afọ nwere ike ịgbakọta
●Obere Nchekwa Mmiri eriri afọ nri Ọkwa na-enweghị isi nnukwu ụtọ
● Plastic LDPE jiri akụrụngwa akụrụngwa Japan kacha mma mee.
● Na gburugburu ebe obibi adịghị egbu egbu
● Enweghị BPA PVC ma ọ bụ DEHP
● Enweghị isi PVC plastik
● A gaghị emetụta uto mmiri
● N'ụzọ doro anya.
Nhọrọ ike dị iche iche: 5L 10L 20L.
Ngwọta akpa mmiri na-adaba
Ọ bụrụ na ị na-achọ otu ngwaahịa ma enweghị ike ịchọta ya ozugbo na webụsaịtị anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. A sị ka e kwuwe, ụdị ngwaahịa anyị na-egosi mgbe niile, anaghị agwụ agwụ. Nnọọ ịkpọtụrụ anyị!E-mail:lisa@cncheertainer.com
N'èzí, Mberede & ojiji kwa ụbọchị:
Akpa mmiri na-adaba adaba, nke dabara maka ihe omume dị n'èzí, dị ka akpa azụ azụ, ịma ụlọikwuu, ịga njem, ịrịgo, ịchụ nta, nwere ike inyere gị aka ịchekwa mmiri niile ezinụlọ gị chọrọ ngwa ngwa na n'enweghị nsogbu n'oge ihe mberede ma ọ bụ ọdachi ndị na-emere onwe ha dị ka ifufe, oké ifufe, ala ọma jijiji. , ọkụ, idei mmiri ma ọ bụ oké ọkọchị. Ọ dịkwa mma maka ojiji kwa ụbọchị, dị ka mmiri mberede ụgbọ ala & ọdụ ịsa aka na mmemme na mmemme. Buga nnukwu mmiri n'ụzọ dị mfe.
Leakproof Spigot: Nhazi faucet pụrụ iche, ọ dị mfe ịgbanye / gbanyụọ emebere spigot, gbochie ịwụ mmiri maka ibu mmiri, enweghị nsogbu maka ịgbasa mmiri n'ebe niile, ị nwere ike ịchịkwa mmiri na-asọ ngwa ngwa, dị mfe iji.
☑ Enwere ike ịgbakọ, enwere ike ibugharị, ọkụ, kọmpat & nke enwere ike iji ya mee ihe.
☑ Na-adị nro ma na-agbanwe agbanwe ọbụlagodi mgbe oyi na-ejigide ọdịdị.
☑ Ọ dị mfe imeju, kpoo, igbapu na ijikwa ya ọzọ.
☑ Aka akpụzi dị nro na-eme ka ijide na ibufe dị mfe.
☑ Enwere ike ịchekwa ma dị fechaa n'akpa gị ma ọ bụ n'ụgbọ ala gị.
Akpa nchekwa mmiri dị mkpa maka ndụ kwa ụbọchị na ọnọdụ mberede. Ọ bụrụ na akụrụngwa mmiri dị n'obodo gị kwụsịrị ịrụ ọrụ na mberede, kedu ka ị ga-esi ṅụọ ma ọ bụ hichaa ya?
Ọ bụrụ na enwere ajọ ifufe, oké ifufe, idei mmiri, ọkụ, ụkọ mmiri ozuzo, ala ọma jijiji, gịnị ka ị ga-eji chekwaa mmiri iji gboo mkpa mmiri gị?
Akpa nchekwa mmiri anyị a na-atụgharị ga-enye gị nkwadebe ihe mberede kacha mkpa maka akụrụngwa na-azọpụta ndụ gị!
Akpa anyị nwere aka bụ ihe LDPE dị elu, enweghị BPA, polyethylene ọkwa nri na arịa plastik na-adịghị egbu egbu.
Akpa mmiri a na-emegharị emegharị bụ ihe a na-atụgharị, ọkụ, nke a na-ebugharị, nke na-adịgide adịgide, nke a na-ejikarị eme ihe, nke kwesịrị ekwesị maka ebe ọ bụla, dị mfe ịwụnye na iji.
OKWU ndị ahịa
Nke gara aga: eriri afọ plastik nwere ike imebi ldpe cubitainer 5l
Osote: bilie akpa akpa na spout mmiri akpa ebi
1 galọn mmiri akpa
Akpa mmiri eriri afo
Akpa mmiri nwere ike mpịaji
Akpa karama mmiri nwere ike mpịaji
Akpa mmiri na-atụgharị
Akpa mmiri dị n'èzí
Akpa Plastic Maka Mmiri
Kwuo obere akpa na akpa mmiri spout ebipụtara
Imepụta akpa mmiri
Akpa mmiri maka njem njem
Ọkụba Nchekwa Mmiri enwere ike ibugharị
Water Bladder Nchekwa Tank Collapsible Water Co...
Mpempe mmiri BPA efu na-adaba (ya na Spigot)
bilie akpa akpa na spout mmiri akpa ebi